Ny sidina fiaramanidina Biman Airlines dia nidina an-dalamby teny amin'ny seranam-piaramanidina Yangon, vaky telo
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny sidina fiaramanidina Biman Airlines dia nidina an-dalamby teny amin'ny seranam-piaramanidina Yangon, vaky telo
Enga anie 8, 2019
Fiaramanidina Biman Airlines 'Bombardier Dash-8 no nidina an-tsambo avy teny amin'ny lalamby tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Yangon any Myanmar, very ny elany ary vaky telo. Niezaka ny hidina ny mpanamory satria niseho ny loza.
Na dia misy aza ny tatitra mifanipaka, ny mpitondra tenin'ny Biman Airlines dia nilaza tamin'ny tranokalam-baovao Bangladeshi BDnews fa efatra amin'ireo olona 33 tao anatiny no naratra, anisan'izany ny mpanamory fiaramanidina.
Ny sary nozaraina tao amin'ny media sosialy dia mampiseho ny halehiben'ny faharavana.
Nidina tany amin'ny seranam-piaramanidina Yangon ny fiaramanidina rehefa nitrangan'ny loza, taorian'ny sidina avy any amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Dhaka-Srahjalal ao Bangladesh. Ratsy ny toetrandro, ary nilaza ny mpitondratenin'ny seranam-piaramanidina Biman fa izany no nahatonga ny fianjerana.
Ny fiaramanidina dia an'ny Biman Bangladesh Airlines, ilay mpitondra saina any Bangladesh. Ankoatry ny fanandramana fanolanana an-keriny tamin'ny volana febroary dia tsy niharan'ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana ny zotram-piaramanidina tao anatin'ny folo taona.
Nikatona ny seranam-piaramanidina Yangon taorian'ny fianjerana, ary ny sidina niditra dia namboarina.
Ny mpanatanteraka Silicon Valley Tech dia lasa CTO amin'ny sehatry ny hotely Bidroom
Fanararaotam-pandeha noho ny tanjona? United Airlines manampy ny mpitaingina bisikileta SIDA / LifeCycle